बैंकमा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग घट्यो, ४० अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ३९ अर्ब ऋण लगानी — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > बैंकमा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग घट्यो, ४० अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ३९ अर्ब ऋण लगानी
बैंकमा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग घट्यो, ४० अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ३९ अर्ब ऋण लगानी
काठमाडौं । चैत तेस्रो साता वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग निकै बढेको छ । चैत तेस्रो साता निक्षेप संकलन ४० अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जाको माग ३९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यो साता कर्जाको माग भन्दा निक्षेप संकलन घटेको छ ।
चैत तेस्रो सातासम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन ३८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ३५ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरुमा निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग यो साता केही मात्रामा घटेको छ ।
बैंकर्स संघका अनुसार चैत दोस्रो सातासम्म बैंकहरुले ३८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तेस्रो साता आइपुग्दा ३८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३५ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
संघका अनुसार सञ्चालनमा रहेको २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले फागुन महिनामा मात्रै २७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गेरर ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । फागुन तोस्रो साता बैंकहरु निक्षेप संकलनमा निकै आक्रमक देखिएका थिए । चौथो सातामा आएर त्यो निकै कमी आएका थियो ।
चैत पहिलो साताको तुलनामा दोस्रो साता निक्षेप संकलन केही बढेको थियो । दोस्रो साताको तुलनामा तेस्रो साता निक्षेप संकलन ह्वात्तै बढेको छ । संघको तथ्याङक अनुसार गत साता कर्जा लगानी सुस्त देखिएको छ ।
२०७७ चैत्र २२ गते १७:०७ मा प्रकाशित
पुल्चोक झडप : प्रेस ज्याकेट लगाएर प्रहरीमाथि ढुंगा हान्ने को हुन् ?
सेयर बजार उचालिन सकेन,तापनि कमाउनेमा को–को ?
आजदेखि अनलाइनबाट सेयर कारोबार, बजार बढ्ने अपेक्षामा लगानीकर्ता
नेप्सेले भर्खरै जारी गर्यो अत्यन्त जरुरी सूचना